Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese Cristiano Ronaldo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Cristiano Ronaldo na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Girlmụ agbọghọ ndị gara aga, Onye Mmekọ, Ndụ, Ndụ bara uru na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na -emebi ihe omume dị mkpa na ndụ akụkọ akụkọ Portuguese. Lifebogger na -amalite site na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị, lee ntorobịa ya gaa na ebe ngosi nka nke okenye - ihe ngosi doro anya nke Cristiano Ronaldo's Bio.
Ee, mụ na gị maara maka asọmpi ya na-adịte aka Lionel Messi - dị ka onye bu GOAT na Football.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu, naanị ndị egwu ole na ole agụọla nchịkọta akụkọ nke akụkọ ndụ Cristiano Ronaldo ya. Anyị nwere ya, akwadobere gị niile. Ugbu a, n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Cristiano Ronaldo Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, aha njirimara kachasị amasị ya bụ 'GOAT.' Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro mụrụ na 5th ụbọchị nke February 1985 na nne ya, Maria Dolores dos Santos Aveiro na nna nna, José Dinis Aveiro.
Mgbe a mụrụ ya, nna ya kpọrọ ya 'Ronaldo' - na mmasị onye bụbu onye isi ala US Ronald Reagan, onye ka na -a swornụ iyi maka oge ọchịchị ya nke abụọ.
Ọzọkwa, ebe ọmụmụ Ronnie bụ Funchal, nke dị na agwaetiti Madeira. Ọ bụrụ na ịmaghị, nke a abụghị ala Portugal kama ọ bụ otu agwaetiti nke obodo ahụ kwuru.
Cristiano Ronaldo bụ nwa ikpeazụ n'ime ụmụaka atọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya, Maria Dolores (onye na -esi nri) na José Dinis Aveiro (onye bụbu onye agha, onye na -elekọta ubi, na onye na -eme ngwa).
Lee, otu n'ime foto izizi nke akụkọ egwuregwu bọọlụ n'akụkụ nne ya na nna ya ka ha si ụka ụka Katọlik lọta - Funchal parish nke Santo António.
Na -etolite dị ka nwa nke ezinụlọ ya:
Ronnie tolitere na nwanne ya nwoke nke okenye, Hugo na ụmụnne nwanyị abụọ ndị tọrọ, Elma na Katia. Dịka nwa ikpeazụ amụrụ n'ezinụlọ ya, ndị mgbasa ozi nwere ya na mama na papa mekpuru ya nke ukwuu.
Laa azụ n'oge ahụ, Cristiano na-apụnara onwe ya mgbe ọ bụla o mere mpụ n'ụlọ. Kama ime ihe ọ bụla ọ na -eme, ọ ga -eme ka ọ na -ebe ákwá n'ihu nne na nna ya.
Mgbe nke a gasị, ụmụnne ya ndị okenye (Hugo, Elma na Katia) na -ata ụta maka omume ọjọọ ya.
Zute Smụnne Cristiano Ronaldo: Nwanne ya nwoke bụ Hugo (n'etiti). Istersmụnne nwanyị - Elma (n’aka ekpe) na Katia (n’aka nri).
N'adịghị ka ndị okenye ya, ịbụ onye a na -eme achịcha na onye mebiri emebi wepụrụ ya. Hugo, Emla, na Katia aghaghị ime ihe ndị mụrụ ha tụrụ anya ya.
Mgbe ọ bụ nwata, Ronaldo setịpụrụ nrọ ya iji nweta ihe ịga nke ọma n'ụzọ nke ya. O nwere ohere pụrụ iche na ndụ karịa Hugo nwanne ya nwoke nke okenye. Ọ nwere ike ịmasị gị ịmara na mgbe ọ na -etolite, Cristiano akwapụtaghị uwe.
Site na mbido, Maria Dolores dos Santos na di ya, José Dinis, gbara mbọ hụ na ọ nwetara ma yikwasị ọmarịcha akwa. Ha na -eji ya ekpuchi eziokwu ahụ bụ na o si n'ụlọ dara ogbenye.
Cristiano Ronaldo Ezinụlọ:
Onye ọ bụla maara na-akpọsa GOAT bụ Football First Billionaire. N'ụzọ na-akpali mmasị, CR7 sitere na mmalite dị umeala n'obi. Ezinụlọ Cristiano Ronaldo abụghị ọgaranya, ọ hụkwara oke ogbenye n'oge ọ bụ nwata.
Ụlọ ebe o tolitere gosipụtara ịda ogbenye nke ezinụlọ ya chere ihu n'oge ahụ. Ọ na -eje ozi dị ka nkuzi n'ịdị umeala n'obi ọ gaghị echezọ ma ọlị.
Cristiano tolitere n'ụlọ dara ogbenye, ya na ụmụnne ya niile kerịtakwara ọnụ ụlọ.
N'ihi oke ịda ogbenye n'ime ezinụlọ ya, nne ya gwara ndị mgbasa ozi otu oge na ọ chọrọ ite ime Ronaldo mgbe ọ dị ime ya.
Akụkụ nke mkpebi a bịara n'ihi nsogbu mmanya nke di ya. Ọzọkwa, egwu ịmụba ụmụaka.
Mgbe ha gara ụlọ ọgwụ, ndị dọkịta jụrụ ite ime ahụ. Mgbe arịrịọ Maria Dolores jụrụ, ọ gara AWOL. Nne CR7 malitere ị beerụ biya na -ekpo ọkụ.
Ọ gbakwara ọsọ ọsọ, na -atụ anya na nwa ya ga -anwụ n'afọ. Obi dị m ụtọ na nke ahụ emeghị. A mụrụ Cristiano dị egwu na obi.
Obi abụọ adịghị ya, onye ọ bụla chere na CR7 sitere na Portugal ma ọ bụ otu agwaetiti ya. Nke a abụghị eziokwu. Nnyocha Lifebogger na usoro ọmụmụ nke Cristiano na -ekpughe eziokwu na -egosi usoro ọmụmụ ya ma ọ bụ mgbọrọgwụ ezinụlọ ya na Praia.
Nke a bụ isi obodo na obodo kachasị na Cape Verde - obodo agwaetiti dị na West Africa. Site na ntinye, Cristiano Ronaldo sitere na West Africa.
You maara… ezinụlọ Isabel Rosa da Piedade - nne nke Humberto Cirilo Aveiro - onye bụ nna nna Cristiano Ronaldo - si Praia, Isi Obodo Cape Verde.
Mgbe ọ dị afọ 16, ezinụlọ ya hapụrụ ala nna ha Praia ka ọ dịrị ndụ na agwaetiti Atlantic ọzọ akpọrọ 'Madeira.' Nke a bụ ebe amụrụ ọgbọ atọ ya ọzọ.
Lee, otu n'ime ụmụ ya bụ Cristiano Ronaldo, GOAT Football. Nke a pụtara na CR7 sitere na ezinụlọ ya sitere na West Africa.
Akụkọ Cristiano Ronaldo Football:
Mgbe Ronaldo na-aga akwụkwọ, ọ debara aha ya Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, ebe ọ malitere agụmakwụkwọ elementrị ya. Mgbe ọ dị obere, Ronnie enweghị mmasị n'ịmụ akwụkwọ.
Ọ na -echegbu onwe ya karịa iso nna ya gaa klọb bọọlụ Andorinha na Funchal. Nke a bụ ebe José Dinis Aveiro weere ọrụ nke abụọ dị ka onye na -eme ngwa.
Nleda Ronaldo maka ụlọ akwụkwọ siri ike ka ọ na-etolite. Ọ gaghị eme ihe omume ụlọ akwụkwọ ya, kama ọ ga-etinye aka na mmasị ya na-eto eto maka football. Mgbe ọ dị afọ asatọ, ọ bịanyere aka na Andorinha football agụmakwụkwọ.
Iji lekọta ya anya nke ọma, papa ya (José Dinis Aveiro) kpebiri ịrụ ọrụ oge niile dị ka onye na-arụ ọrụ na agụmakwụkwọ. Inyere nwa ya nwoke aka itughari ntọala oru bu ihe di nkpa nye José Aveiro.
Onye otu egwuregwu nwata Ronaldo bụ Ricardo Santos, (onye nkuzi Andorinha ugbu a) na -echeta na ọ nwere oke agụụ na mmetụta adịghị ike mgbe ọ nọ na Andorinha FC. Dị ka Ricardo si kwuo;
“C RONALDO n’ezie EN EN W Mmeri emeri. MGBE NA-AD THATGHPP EME, RONALDO GA-ETI. Ọ kwara ákwá nke ukwuu nke na ọ nwetara aha 'CRYBABY'. ”
Vingga Ebe Ndị Ntorobịa:
Mgbe ya na CF Andorinha nọrọ afọ abụọ, CR7 gara n'ihu ịnwa Nacional, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ọzọ na agwaetiti Madeira. Mgbe ọ na-egwu ebe ahụ, ndị mmadụ hụrụ na o nwere onyinye pụrụ iche.
Nke a pụtara ìhè n'asọmpi na nsọpụrụ o meriri ha. Lee, foto nke nwata ahụ ka ya na ndị mụrụ ya, ndị ọrụ klọb na ụfọdụ ndị ezinụlọ na -eme mmeri asọmpi.
N'oge ahụ, ọ nweghị onye maara na ọ ga -abụ onye egwuregwu bọọlụ kachasị n'ụwa.
Hapụ ndị nne na nna na ndị ezinụlọ na Lisbon:
N'ịchọ imeziwanye nkà ịgba bọọlụ ya na ịchekwa nne na nna ya ịda ogbenye, Cristiano mere mkpebi kasịnụ n'oge ntorobịa ya. Ọ hapụrụ ezinụlọ ya na Madeira maka Lisbon mgbe ọ dị afọ 12.
N'afọ ahụ 1997, Ronnie na Sporting CP gara akwụkwọ ụbọchị atọ, bụ onye bịanyere aka na ya maka ego nke £ 1,500 - mgbe ọ gafesịrị ọnwụnwa ha.
Hapụ ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ abụghị mkpebi dị mfe dịka ọ na-ebe ákwá kwa ụbọchị. N'ezie, nke a bụ oge nke abụọ Ronaldo dịrị ndụ ruo mgbe aha nwata bụ "Cry Baby." N'agbanyeghị owu ọmụma ya, ọ nọgidesiri ike wee na-arụsi ọrụ ike.
Imchọ Elu na ọchịchọ ịpụ na School:
Ka ọ na-erule afọ 14, Ronaldo malitere inwe ụdị ara ahụ iji mee onwe ya ka ọ bụrụ na ọ ga - eme egwuregwu bọọlụ. Nke a ka o mere, ihe niile n'aha ịdebe mmụọ dị mma nke imeri owu ọmụma nke ịnọpụ ezinụlọ.
Ka oge na-aga, ọ malitere achọghị echiche nke ịgwakọta agụmakwụkwọ na football. N'ọchịchọ ya ilekwasị anya na egwuregwu ahụ, Ron bịara soro nne ya kwụsị akwụkwọ. Ọ bụ ezie na ụmụ akwụkwọ nọ na klas ya ama ama, Ronnie dara ogbenye enwebeghị ezigbo oge yana ndị nkuzi ya.
Ronaldochụpụ Ronaldolọ Akwụkwọ Cristiano Ronaldo Akụkọ:
You gotmaara ya n'otu oge ka ọ tụsịrị onye nkụzi ya oche, onye ọ sịrị na ọ “ledara” ya anya.
Mgbe a chụsịrị ya n'ụlọ akwụkwọ, Ronaldo kwere nkwa igosi onye nkuzi ya ụgha. O mere ihe na-egbu mgbu nke ịchụpụ site na iri nri na ịgba bọọlụ. N'oge ahụ, ọ rụrụ ọrụ na ọsọ ya ma wuo ya. Agbanyeghị, ịnweta oke ọsọ dị ka nke ukwuu maka ka ọ dị obere.
Cristiano Ronaldo Obi Nsogbu:
Inwe oke ọsọ dị ka nwatakịrị nyere ahụ ya na -echegbugbu mmeghachi omume mmetụta siri ike, gụnyere nchekasị.
Ọ dugara na Cristiano nwee ọrịa obi na -agba ọsọ. Nke a bụ nsogbu ahụike nke fọrọ nke nta ka ọ manye ya ịhapụ ịgba bọl.
Na nzaghachi obi ya na -ada ada, ndị ọrụ ahụike Sporting CP chọrọ nkwado n'aka nne na nna Cristiano Ronaldo ka ha waa ya ahụ.
N'ịbụ ndị ọ joyụ nke ndị òtù ezinụlọ ya, e ji laser mee ka okporo ụzọ obi ya dịkwuo mma. Nke a mere ka mgbasa ọbara dị n’obi ya bụrụ ihe nkịtị. Obi dị m ụtọ, football gara n'ihu mgbe ndị dọkịta kpochapụrụ ya n'ụlọ ọgwụ.
Cristiano Ronaldo Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ dị afọ 16, CR7 kpebiri ịgbanwe onwe ya - na -enwe nnukwu agụụ n'ihi ọzụzụ siri ike mgbe niile.
N'oge na-adịghị anya, onye njikwa otu egwuregwu mbụ nke Sporting László Bölöni nyere ya ohere ohere maka ndị otu egwuregwu. Nke a bịara mgbe ọ masịrị ya na dribbling ya.
N'afọ 2003, kpomkwem na ụbọchị iri na abụọ nke ọnwa Ọgọstụ, Ronnie nwetara ohere izute akara aka. N'ụbọchị ahụ, Sporting Lisbon na Manchester United nwere egwuregwu enyi na enyi tupu oge eruo na László Bölöni họpụtara Ronaldo.
Ị maara?… Ọmarịcha ya nyeere Sporting aka imeri United 3-1.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, ndị egwuregwu United karịsịa Patrice Evra na Rio Ferdinand gbara ume Sir Alex Ferguson ịbịanye aka na nwata.
Iji kwuo eziokwu, onye bụbu onye isi Manchester United nwere mmasị na nnukwu onyinye nke dribbling na gbaa dị ike. Nke a bụ isi egwuregwu ahụ gbanwere akara aka ya.
N'ikpeazụ, Cristiano sonyeere United maka ego (nde £ 12.24) nke mere ya onye ntorobịa kachasị ọnụ na akụkọ egwuregwu bọọlụ Bekee.
Mgbe ọ sonyere United, ọ rịọrọ maka akara 28 nọmba - yiri ihe ọ na -eyi na Sporting. Ọ dabara nke ọma, Ronnie natara akara 7 nọmba kama.
Ndị otu United dị ka George Best, Eric Cantona na David Beckham na -eyiri nọmba jersey. Yiri uwe elu 7 ahụ ghọrọ ihe mkpali maka ndị Portuguese.
Akụkọ Cristiano Ronaldo - Akụkọ Ihe ịga nke ọma:
Na United, Ronny ọ bụghị nanị na ọ nọgidere na-adị egwu ma na-emeziwanye nkà ya wee malite igosipụta na ọ nwere ike ịbụ ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma n'ụwa.
Na-eso 2006 FIFA World Cup, o tinyere aka na ihe mere ebe onye otu na ibe ya Wayne Rooney zitere. N'ihi nke a, Ronaldo nwere mkpọtụ oge niile 2006-07.
Dịka ụzọ isi mechie ndị bekee na ụfọdụ ndị na -akwado United ọnụ, CR7 kwere nkwa na ọ ga -aga n'ihu na -ebute ihe mgbaru ọsọ. N'oge na-adịghị anya, ọ mebiri ihe mgbochi ihe mgbaru ọsọ 20 na nke mbụ wee merie aha Premier League mbụ ya.
Ọtụtụ ihe ịga nke ọma na mkpokọta n'otu n'otu gụnyere FIFA Ballon d'Or mbụ ya sochiri.
Tupu oge 2009-10, CR7 sonyeere Real Madrid maka ego mbufe ihe ndekọ ụwa n'oge ahụ-£ 80 nde (€ 94 nde) nwere nkebi ndepụta billion 1 ijeri.
Na Los Blancos, ọ laghachiri n'ụdị mmeri Ballon d'Or-nke ọ meriri n'usoro.
Icheta oge 451 na egwuregwu 438 na ọtụtụ trophies na nsọpụrụ mere Ronnie ka ọ bụrụ onye na-akwado egwuregwu bọọlụ.
Site na ndabasị na onye isi ala Los Blancos, Florentino Perez, Cristiano chere na ya adịkwaghị mkpa. Nke a mere ka ọ gụọ ụbọchị ya na Real Madrid.
Massimiliano Allegri nwara ihu ọma ya wee merie jackpot n'ụzọ na -awụ akpata oyi n'ahụ site na ịbịanye aka na Legend na Juventus. Na Juve, Cristiano bidoro mebie ndekọ ihe mgbaru ọsọ mba na klọb.
Iji mee ka nsọpụrụ ya dị n'otu, o duuru ọbụna Portugal ịchịkọta ọtụtụ iko mba na nsọpụrụ nye ụlọ ọrụ ya.
N'oge itinye Bio a, Cristiano Ronaldo dị ugbu a n'etiti Worlds Sporting Greats asaa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Cristiano Ronaldo Ịhụnanya Ndụ - Ndị enyi nwanyị gara aga:
Ebe ọ bụ na ọ na -ebili n'egwuregwu bọọlụ, ndị Portuguese ka nọ na -ezobe ihe gbasara obi ya.
Lifebogger na -ele akụkọ mmekọrịta Cristiano Ronaldo anya n'ụzọ atọ. Nke mbụ bụ ụbọchị nkwenye ya, nke abụọ bụ nzute, nke atọ bụ ndepụta CR.
31mụ nwanyị XNUMX gara aga nke Cristiano Ronaldo:
N'ebe ọha, mmekọrịta ya gosipụtara gụnyere, (1) Jordana Jardel (2003 - 2004), (2) Merche Romero (2005 - 2006), (3) Gemma Atkinson (2007), (4) Nereida Gallardo (2008) na (5) Irina Shayk (2010 - 2015).
Cristiano Ronaldo mkpakọrịta nwoke na nwaanyị zutere:
A na -anụ kepu kepu na Ron na ụmụ nwanyị ndị na -eso ya na -akpa; (7) Mia Judaken (2006), (8) Bipasha Basu (2007), (9) Raffaella Fico (2009), (10) Paris Hilton (2009) na (11) Olivia Saunders (2009).
Agba nke abụọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị CR7 gụnyere; (12) Kim Kardashian West (2010), (13) Andressa Urach (2013), (14) Alesia Riabenkova (2014) (15) Daniella Chavez (2014), (16) Jordana Jardel (2003 - 2004) na (17) Alessia Tedeschi (2015) .
Agba nke atọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị CR7 gụnyere (18) Maja Darving (2015), (19) Alessandra Ambrosio (2015), (20) Daniella Grace (2016), (21) Paula Suarez (2016), (22) Cristina Buccino ( 2016) na (23) Cassandre Davis (2016).
Cristiano Ronaldo nko-elu:
Anyị maara na Sultan nke Stopover ka ya na ụmụ nwanyị ndị a nwee mmekọrịta nwa oge; (24) Rita Pereira (2012), (25) Elisa De Panicis (2012), (26) Amal Saber (2014), (27) Diana Morales (2014), (28) Melanie Martins (2015), (29) Lucia Villalon (2015), (30) Nataly Rincon (2015), (31) Nikoleta Lozanova (2016) na (32) Desiree Cordero (2016).
Cristiano Ronaldo Nwanyị Ugbu a:
Ọ bụ Georgina Rodriguez. Enyi nwanyị Cristiano Ronaldo sitere na obodo Jaca nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Spanish, nke dịdebere ókèala France, ihe dịka 450km site na Madrid.
Ọ malitere ndụ dị ka onye na -eri nri n'obodo ya tupu ya na ezinụlọ ebiri na Bristol, England.
Kedu ka Georgina Rodriguez si zute Cristiano Ronaldo?
Dabere na AS Sports News, ọ zutere kpakpando Juve n'otu ụlọ ahịa Gucci na Madrid, n'otu oge ọ na -arụ ọrụ dị ka onye na -enyere ụlọ ahịa aka.
N'ikwu okwu banyere mbụ ọ hụrụ ya, Georgina kọrọ otu oge;
“AH HIS Ya, Ogologo Ya na Anya Ya Na-elebara Anya. Ozugbo ahụ, M na-na-eje ije n'ihu ya na ọkụ na-enyo enyo n'etiti anyị.
Enwere m ezigbo ihere na ikekwe Nke a kpaliri m n'ihu ya, onye jiri otu nha anya metụta m.
MGBE MGBE, RZỌ RONNIE NA-EME M, NA-AHAR M, NA HOVR ME M n'anya mere ezumike. ”
Cristianomụ Cristiano Ronaldo:
Nwa afọ Madeira ghọrọ nna mgbe ọ dị afọ 25 mgbe amụrụ nwa mbụ ya, Cristiano Jr - n'ụbọchị 17th nke June 2010.
CR7 egosighi n'ihu ọha onye bụ nne Cristiano Jr, onye o zoro ezo kemgbe amụrụ ya na United States.
Cristiano Jr bụ onye ama ama na ndụ nna ya ma ọ na-apụkarị n'akụkụ ya na mmemme onyinye. Dị ka nna ya, ọ na-arọ nrọ ịghọ ezigbo ndị ịgba ọsọ.
Onye isi ụgbọ mmiri Portugal nwekwara ejima, nwa nwoke na nwa agbọghọ - Mateo na Eva. Childrenmụaka abụọ ahụ bịara site na enyemaka nke nne na-anọchi anya - n'oge ọkọchị nke 2017.
Mgbe amụrụ ejima ya, enwere ntamu na Ronaldo ga -anabata nnabata nke anọ na ezinụlọ ya. Nke a ghọrọ nwa mbụ ya na enyi nwanyị ya, Georgina Rodriguez. Ọ mụrụ nwa nwanyị ha na -akpọ Alana Martina.
Cristiano Ronaldo Web si ebi ndụ:
Yabụ kedu ihe Ronnie na -emefu ego ya? Otu n'ime ihe kacha amasị Ronaldo bụ inweta ụgbọ ala na ụlọ. Ọ na -anya ụgbọala Lamborghini Aventador $ 300,000 (207,000), yana Maserati ya. Cristiano nwekwara Bentley, Porsche, Mercedes, n'etiti ndị ọzọ.
Ka anyị na-ede Bio, Cristiano Ronaldo bi na obere ụlọ $ 1.6 nke ụlọ Otero Group wuru, onye ọmarịcha ụlọ mmepe. Gị ego ahụ nwere ike iyi ka ọ bụ obere obere maka ndị ịgba ọsọ bọọlụ na-ahụkarị na Forbes.
Ọzọkwa ịmara, ụlọ ezumike na -etolite naanị obere akụkụ nke Pọtụfoliyo ihe onwunwe nde $ 47 ọ nwere.
Nke a gụnyere ụlọ dị na Turin, ụlọ dị na Trump Tower nke New York City, yana akwa na La Finca, Spain. N'ime ụlọ CR7 niile, ọ na -etinye anya ya nke ukwuu.
Njem ezinụlọ CR7:
Agbanyeghị na bọọlụ kpọgara ya Italytali, obi ezumike Ronaldo doro anya na mpaghara Iberian. N'ihi nke ahụ, ọ zụtara akwa mpe mpe akwa ọhụrụ ga -akwado ezinụlọ ya n'ụbọchị ezumike ha n'ụsọ osimiri Spanish.
CR7 Ndụ Onwe Onye:
Iji kọwaa ụdị onye ọ bụ, anyị nwere akụkọ akụkọ BBC. Revealedlọ ọrụ Mgbasaozi gosipụtara ozugbo gịnị kpatara ndị ukwu Ronaldo na Messi ji yie ka anyị chere. N'oge a, anyị ahọrọla ihe abụọ gbasara ụdị CR7.
Nke mbu, igwe ebumnobi na -enwe nganga ebighi ebi maka nzụlite ya dị ala. Nke abuo, o juputara na nkwenye onwe onye. Dị ka ọ dị, Ronnie maara na ọ nwere akara aka maka ịdị ukwuu.
Ndụ Cristiano Ronaldo:
Inwe mmetụta nke ịdị n'otu bụ onyinye kacha ọnụ ahịa Ronnie nyere onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya kemgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Nke a emebela ịhụnanya ịhụnanya na -adịghị emebi emebi. N'ebe a, anyị ga -agwa gị gbasara nne na nna ya na ndị ezinụlọ ndị ọzọ.
Banyere Christiano Ronaldo Nna:
A mụrụ José Dinis Aveiro n'ụbọchị 30th nke Septemba 1953 nye nne ya, Filomena Aveiro. N'ịbụ onye na -achọ ịbụ onye na -azụ anụ na onye na -elekọta ubi, nna Cristiano Ronaldo bụbu onye agha lụrụ ọgụ a ma ama maka Portugal.
Mgbe ọ nọ na ndị agha, José Dinis Aveiro sonyere n'inyere Portugal aka igbochi Angola iji nweta nnwere onwe ya.
N'ụzọ dị mwute, agha ahụ meriri ya na ndị agha ya, bụ́ nke ọ hụrụ ka ndị agha ibe ya na -emegide ya na -eme ihe ọjọọ. Agha ahụ hapụrụ ya nsogbu uche na otu a ka José Dinis si bụrụ onye mmanya na -adịghị ala ala.
Ronaldo anaghị a drinkụ mmanya na isi ihe kpatara ya bụ n'ihi nna ya. José Dinis Aveiro bụ onye aholicụrụma na -enweghị nchegharị tupu ọ nwụọ na 6th nke Septemba 2005.
Papa CR7 nwụrụ n'ihi ọrịa imeju mgbe ọ dị naanị afọ abụọ ka ọ na -arụ ọrụ na Old Trafford. Ọnwụ José Dinis Aveiro bụ n'ihi nsogbu butere site n'ị -ụbiga mmanya ókè.
Banyere nne mama Christiano Ronaldo:
A mụrụ Maria Dolores dos Santos Aveiro na 31 Disemba 1954 na nne ya, Matilde dos Santos da Viveiros na nna, Jose Vivieros (onye ọcha). Nne Ronaldo bụ osi nri site na ọrụ.
Maria alụghị nwanyị ọzọ mgbe José Dinis Aveiro nwụsịrị na 2005. Dị ka otu akụkọ si kwuo, ọ malitere ịmalite ịlụ nwoke aha ya bụ Jose Andrade. Zute enyi nwoke Maria Dolores nke nwere ike ịbụ onye di na nwunye Cristiano Ronaldo.
Ụbọchị ndị a, Maria na -ebi ndụ okomoko. Ọ na-enwe mmasị iso nwa ya na ụmụ ụmụ ya na-emeri achịcha. Nne CR7 nwere nnukwu onye nkwado na mgbasa ozi mmekọrịta - ihe karịrị nde 1.7 nde ndị na -eso ụzọ Instagram - stats 2020.
Maka ezinụlọ ya, oge nwute bịara mgbe Maria Dolores dos Santos chọpụtara ọrịa kansa na 2007.
N'ụzọ dị mma, ọ gbakere kpamkpam mgbe ọtụtụ usoro ọgwụgwọ radieshon gasịrị. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-a drugsụ ọgwụ mgbochi ọrịa kansa iji gbochie ọrịa ahụ.
N’afọ 2015, ndị ọchịchị Spain boro ya ebubo ire ere ego. Ha kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ elu Madrid 'Barajas' - maka iburu € 55,000 n'akpa akpa ya.
Maria edejupụtaghị mpempe akwụkwọ nkwupụta ya, ndị ọchịchị Spain weghara ego ya.
Banyere Nwanna Christiano Ronaldo:
Hugo dos Santos Aveiro, amụrụ na 1975, bụ okenye CR10 afọ iri. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ndụ na -esiri ya ike - nwoke nke ọtụtụ na -ewere dị ka onye bi na ndò nwanne ya ukwu.
Laa azụ n'oge ahụ, nwanne Cristiano Ronaldo bụ onye na -ekwe nkwa ịgba bọọlụ n'otu oge. N'ụzọ dị mwute, ọ dabara na ndụ ị drinkingụ mmanya na ị ofụ ọgwụ ike na njedebe 1990s.
Dị ka ị chepụtara, akụkụ mmanya ahụ bụ mkpụrụ ndụ ihe riri ahụ nke na -agba na ezinụlọ Aveiro.
N'ihi nkwado Ronnie, Hugo, bụ onye natara ugbu a na-enweta ngọzi site na ịhụnanya na nkwado Cristiano. Ka m na-ede Bio nke Cristiano Ronaldo, Hugo bụ onye nchịkwa nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie CR7 na Madeira, Portugal.
Banyere Katia Aveiro:
Amụrụ na 5fh ụbọchị nke Ọktoba 1976 (afọ itoolu ka okenye), ọ bụ nwanne nwanyị okenye Cristiano Ronaldo. Katia Aveiro bụ onye na-agụ abụ Portuguese na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi ekele nwanne ya nwoke nwere.
N'etiti ụmụnne nwanyị Ronaldo niile, ọ bụ ya kacha dịrị ya nso. Kieta na -ewepụta oge zuru oke iji gbachitere nwanne ya nwoke oge ọ bụla ndị na -akwado ya na -adọkpụrụ ya.
Ọ na-akụsi ike nke ukwuu ndị na-emegide Anti-Messi ma ọ bụ ndị nwere ihe ọ bụla megide CR7. Nke a bụ abụ kacha mma Katia Aveiro anyị maara.
Banyere Elma dos Santos Aveiro:
Amụrụ na ụbọchị iri nke Mach 10, ọ bụ ọkpara Cristiano Ronaldo. Ọzọkwa nwa mbụ nke ezinụlọ. Ọ bụ ezie na Elma na -ewu ewu karịa ka Katia na -eme.
Ọ gara ụlọ akwụkwọ na Peru tupu ọ kwaga United States ịga Mahadum Cincinnati.
Elma na -akpọ nwanne ya nwoke nwoke dịka 'onye kacha mma.' Dị ka Katia, ọ naghị emere ndị na -adọkpụ CR7 ebere.
Ụbọchị ndị a, ọ na -ebu agha ya ozugbo na nwanne ya nwoke Lionel Messi. Elma biputere onyonyo nke Lionel Messi na -efe nwanne ya nwoke ofufe.
Ndị nne na nna ochie Cristiano Ronaldo:
Site n'akụkụ nne ya, enwere ozi dị ukwuu gbasara ndị ikwu Portuguese.
Nne na nna ochie Cristiano Ronaldo (Jose Vivieros na Maria-Angela Spinola) mejupụtara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Portugal bi na mpaghara Perth nke Yangebup, Western Australia.
Nne abụọ ahụ hapụrụ Funchal (na Madeira) gaa Australia n'ihe dị ka afọ 2000 - niile n'aha ịchọ ndụ dị iche.
N'oge ahụ, nne Ronaldo, Maria Dolores, họọrọ ka ọ nọrọ na Portugal iji lelee ịrịgo nwa ya nke ọma na Sporting Lisbon.
Maria Dolores nwere ọtụtụ ndị ikwu na Australia. N'ezie, ọ bụrụ na akara aka gawara n'ụzọ ọzọ, ọbụlagodi Ronaldo gaara akwaga Australia isonyere ha.
Jose Vivieros, nna nna CR7, ji Maria na -anya isi maka ilekọta nwa nwa ya nke na -eme ebili mmiri n'egwuregwu bọọlụ ụwa.
Site n'akụkụ nna ya, Filomena Aveiro bụ (foto dị n'okpuru) nne nne Cristiano Ronaldo.
Nne CR7 nna (mbubreyo José Dinis Aveiro) nwụrụ n'ụlọ ọgwụ na Portugal n'ụbọchị 8th nke July 2014 mgbe a nabatara ya ọtụtụ izu.
Enweghi akwụkwọ gbasara nna nna nke Cristiano Ronaldo.
Ndị ikwu Cristiano Ronaldo:
Nwa nwanyị mbụ nke José Dinis Aveiro na Maria Dolores (Elma dos Santos Aveiro) nwere nwa nwanyị toro eto aha ya bụ Eleonor Caires.
Ọ bụ Cristiano Ronaldo nke mbụ mara mma yana mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta. Mara mma Eleonor Caires ka Elma na Edgar (nna ya) mụrụ.
Onye ọzọ onye ikwu Cristiano Ronaldo bụ Alicia Beatriz Aveiro - ada nke nwanne ya nwoke nke okenye, Hugo dos Santos Aveiro. Dị ka Eleonor Caires, ọ bụ kpakpando Instagram nke na-eji ikpo okwu dee banyere ezinụlọ ya na njem.
Nke ato bụ José Dinis Pereira Aveiro, nwa Katia Aveiro na onye ọlụlụ mbụ ya, José Pereira. Dị ka Cristiano Jr, nwanne nwanne Ronaldo (José Dinis Pereira Aveiro) bụkwa onye na - agba ọsọ na ime. Comụ nwanne nne ha pụtara ịbịaru nso ebe a.
Nke anọ na ndị ikwu Cristiano Ronaldo bụ Rodrigo Pereira Aveiro, nwa nwanne ya. Amụrụ na ụbọchị 4th nke Ọgọst 2000 - ọ bụ nwa Katia Aveiro ọzọ.
Anyị na -ahụ ebe a mara mma na -achọ Rodrigo Pereira Aveiro ya na onye yiri enyi nwanyị ya.
Ikpeazụ ma ọ bụghị nke ikpeazụ bụ Hugo Tomás onye bụ nwa Hugo dos Santos Aveiro. Dị ka José Dinis Pereira Aveiro, ọ nọkwa nso nwa nwanne nna ya bụ Cristiano Jr. Dị ka anyị si mara, Hugo Tomas na-eme ncheta ọmụmụ ya na Septemba ọ bụla.
Cristiano Ronaldo Untold Biography (Nke Na-abụghị Ọrụ):
Ebe anyị nụla ọtụtụ ihe banyere ncheta ya, anyị na -ewetara gị ụfọdụ eziokwu ị nwere ike ịmaghị gbasara ya. Nke mbu, site na echiche ndị na-abụghị ọkachamara.
Eziokwu #1: Ihe egwuregwu:
N'otu oge, Cristiano Ronaldo aghọgbuola ndị obodo Madrid n'otu oge site na iji ejiji dị ka onye na -enweghị ebe obibi n'okporo ụzọ.
N'agbanyeghi na ọ na -egosi nka ịgba bọọlụ a ma ama, ọtụtụ ndị egwu ya leghaara ya anya naanị n'ihi na ọ dị ka onye na -enweghị ebe obibi. Ruo taa, ha na -akwa ụta maka ihe ha mere. Lelee vidio prank Ronaldo ebe a.
Eziokwu nke abụọ: Okpukpe Cristiano Ronaldo:
Agbanyeghị, onye egwu bọọlụ Juventus kwere nkwa nkwanye ugwu maka Islam, na -ekwu na ọ bụ okpukpe kacha mma n'ụwa.
Agbanyeghị, Cristiano Ronaldo ka na -ele onwe ya anya dị ka ezigbo onye Roman Katọlik. Mgbe ọ bụ nwata, nne na nna ya gwara ya ka ọ bụrụ nwata nwoke ịchụ aja na parish Funchal nke Santo António.
Okpukpe Cristiano Ronaldo - AKPARA.
Eziokwu nke 3: Nsogbu ndị Buddha:
N'otu oge, Ronaldo katọrọ nke ukwuu maka enweghị nkwanye ùgwù maka ndị Buddha. Ha boro ya ebubo na o guzoro n'amaghị ama na aka ya n'akpa ya na nke kacha njọ, tinye ụkwụ ya na ihe oyiyi Gautam Buddha.
Eziokwu bụ, Ronnie jụrụ ihichapụ foto ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta ya, nke a mere ka ọ tufuo ọtụtụ ndị na -akwado okpukpe.
Akụkọ Buddha Cristiano Ronaldo.
Eziokwu #4: Eziokwu Tattoo CR7:
You ga-ahụ ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ nwere opekata mpe otu. Ronaldo bụ otu n'ime ndị egwuregwu ole na ole na-enweghị egbu egbu naanị n'ihi na ọ na-enye ọbara mgbe niile. N'oge na-adịbeghị anya, CR7 ghọrọ onye na-enye ụmị ọkpụkpụ.
Ihe kpatara CR7 ji enye ọbara - EKPERE.
Eziokwu nke 5: Cristiano Ronaldo ọ bụ nwoke nwere mmasị nwoke?
Ọtụtụ afọ gara aga, a na -azọrọ na CR7 nọ na mmekọ nwoke na nwoke ya na onye ọkpọ bọọlụ Morocco aha ya bụ Badr Hari.
Akụkọ a jọgburu onwe ya pụtara mgbe akụkọ pụtara n'akwụkwọ akụkọ Spanish na ọ na -aga Morocco oge niile ịhụ ya.
Ọbụlagodi Badr Hari nwere foto enyi nwoke ebubo ya nwere nkọwa na -asị:
'Di na nwunye. Hahahaha '
Eziokwu nke 6: Mwakpo Mayorga:
You gabuola na omimi n'ime ebubo mmeko nwoke Cristiano Ronaldo? Ọtụtụ afọ gara aga, Mayorga, onye America si Nevada, gbara onye ọkpụkpọ Portugal ebubo.
O kwuru na ọ wakporo ya na nkwari akụ Las Vegas na 2009 - obere oge ha zutere n'ụlọ oriri na nkwari abalị.
Dị ka ya si kwuo, Ronnie zipụrụ otu "ndị ndozi" iji gbochie nchọpụta mpụ ahụ. Mayorga kwuziri na ya mechara mee ya ka ọ kwụsị ịgbachi nkịtị maka $ 375,000.
Mgbe a jụrụ ya, Ronaldo gọrọ ebubo ahụ, na-ekwusi ike na akọnuche ya doro anya. Kemgbe ahụ, Mayorga ga-abịa n'ihu na akụkọ ya na-ekwu na ọ na-atụ ụjọ ikike dị ukwuu nke ika Ronaldo
Cristiano Ronaldo Eziokwu Na-adịghị Agbanwe (Ọrụ):
Eziokwu nke mbụ: atụnyere ụgwọ ọnwa Ronaldo na mmadụ nkịtị:
Kwa Afọ: € 31,000,000
Ọnwa kwa: € 2,583,333
Kwa Izu: € 595,238
Kwa :bọchị: € 85,034
Kwa elekere: € 3,543
Nkeji nkeji: € 59
Sekọnd: € 0.98
Anyị ji atụmatụ mebie ego CR7 na -enweta. N'ebe a, anyị ga -ekpughere gị ihe akụkọ egwuregwu bọọlụ nwetara ozugbo site na igwu ala akụkọ ndụ ya.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Cristiano Ronaldo's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
You maara?… Onye na-akpata ihe ruru € 4,035 n'ọnwa ga-arụ ọrụ maka ọnwa 645 (afọ 54) iji rite ihe Ronnie nakọtara n'otu ọnwa maka Juventus.
Eziokwu nke 2: Ike nke Cristiano Ronaldo:
Mụ na gị maara na ọ bụ onye ọkpụkpọ zuru oke n'eziokwu yana kwa na FIFA. Agbanyeghị, enwere ihe akara ngosi asọpụrụ adịghị mma nke ọma. Ha gụnyere; mwakpo na nkwụsị.
Eziokwu nke 3: Akụkọ Cristiano Ronaldo na Albert Fantrau:
Ndị na-egwu egwuregwu maara na ọ na-egwuri egwu na Sporting tupu ha akwaga United. You maara?… Enwere akụkọ ịtụnanya banyere ọbụbụenyi otu Ronnie siri banye Sporting Lisbon.
Otu ụbọchị gọziri agọzi, otu onye na-agụ akwụkwọ bịara na-eleta bọọlụ ebe CR7 na ezigbo enyi ya, bụ Albert Fantrau na-egwuri egwu. Tupu egwuregwu ahụ, onye egwuregwu ahụ kwuru;
"M ga - edunye onye ọ bụla gbakere ọtụtụ goolu n'ime Sporting Lisbon agụmakwụkwọ."
Ndị otu Ronaldo meriri egwuregwu 3-0. O nyere akara nke mbụ tupu enyi ya Albert agbakwunye nke abụọ.
Maka ihe mgbaru ọsọ nke atọ, Albert gara otu onye na -eche nche otu, were bọọlụ gbaa ya gburugburu wee nye Ronaldo bọọlụ nke atọ.
Eziokwu bụ, ọ nwere ike tinye naanị bọl ahụ n'ime ụgbụ efu, mana ọ meghị ya. Mgbe a jụrụ ya ihe kpatara na ọ gbaghị akara iji nweta ohere ndụ, Albert Fantrau zara, sị:
"N'IHI NA RONALDO KA M KWES MER ME M".
Albert tụfuru ohere ịbụ onye ukwu site na ikwe ka Ronaldo gaa n'ihu na akara aka ya.
Onye nta akụkọ gara leta ya n'oge na -adịbeghị anya wee chọpụta na ọ nweghị ọrụ mana ọ na -ebi n'ụlọ mara mma.
Albert na ezinụlọ ya ugbu a na -ebi ndụ okomoko maka ekele Cristiano weghachitere ya amara.
Eziokwu #4: Eziokwu Eziokwu:
Ronaldo nwere ụlọ ihe ngosi nka nke ya ugbu a na obodo ya bụ Madeira. Ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka nke nwanne ya nwoke nke okenye, Hugo dos Santos Aveiro na-elekọta.
Gallerylọ ahịa ahụ nwere onyinye na trophies ya niile - nke karịrị 150 - nwere ọnụ ụlọ ndị ọzọ maka trophies n'ọdịnihu, nke ọ na-atụ anya mmeri.
Obi abụọ adịghị ya, akụkọ akụkọ Cristiano Ronaldo's Rags na akụnụba abụghị akụkọ nwere ike ịnọ naanị otu ọnwa.
Akụkọ banyere CR7 na -eme ka anyị ghọta na otu ihe gbasara ụwa anyị. Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ọdịda nke ndụ na -adabara ndị na -amataghị etu ha siri nwee ihe ịga nke ọma mgbe ha dara mbà.
N'agbanyeghị na ha si n'ezinụlọ dara ogbenye, nne na nna Cristiano Ronaldo gosiri na ha nwere ike inye ya ihe ego na -enweghị ike ịzụta.
Ọrụ ịgba bọọlụ mbụ ya agaraghị aga nke ọma ma ọ bụrụ na nna ya - José Dinis Aveiro - ahapụbeghị ọrụ ochie ya dị ka onye na -eme kit na klọb nwa ya nwoke na -egwu. Ọ
N'aka nke ọzọ, Maria Dolores dos Santos Aveiro nọrọ na Portugal ka ọ hụ ọganihu nwa ya nwoke ebe nne na nna nna ya na ndị ikwu ya kwagara Australia. Hugo dos Santos Aveiro ghọrọ onye nna na enweghị nna ha nwụrụ anwụ.
N'ikpeazụ, nnukwu ụmụnne nwanyị - Katia Aveiro na Elma dos Santos Aveiro - egosipụtala ịhụnanya ha n'ọtụtụ oge site na ịgbachitere obere nwanne ha n'aka ndị na -emegide ọrụ. Gaa na ịmatakwu banyere Kathryn Mayorga - Nwanyị Na-ebo Ronaldo ebubo idina mmadụ n'ike.
Daalụ maka ịnọnyere anyị ruo ugbu a na CR7's Bio. Jiri nwayọ mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa ma ọ bụrụ na ị na-egwu ihe na-adịghị mma na ederede a. Ka ị na -aga n'ihu na -agụ agụụ agụụ gbasara akụkọ ndụ gị, jiri tebụl wiki Cristiano Ronaldo anyị.
Ihe omuma nke ndu:
Aha zuru ezu: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH ComM.
Aha otutu: Ewu, C. Ronaldo, CR, CR7, Cris, Ronnie, Ron na sultan nke stepover.
Ụbọchị ọmụmụ: 36 afọ na ọnwa 7.
Ebe amụrụ onye: Lọ ọgwụ Dr. Nélio Mendonça, Funchal, Madeira, Portugal.
Ndị nne na nna: José Dinis Aveiro (Nna) na Maria Dolores dos Santos Aveiro (nne).
Ọrụ Nna: Onye bụbu onye agha, onye na-elekọta ubi na onye na-eme ihe.
Ọrụ Mama: Onye na-esi nri.
Ụmụnne: Elma dos Santos Aveiro (Nwanne nwanyị), Katia Aveiro (Nwanne nwanyị) na Hugo dos Santos Aveiro (Nwanna nwoke).
Ọnọdụ n'ime ezinụlọ: Ikpeazụ Amụrụ.
Ezinụlọ Ezinụlọ: Praia, Isi Obodo Cape Verde.
Nwa nwanyi: Georgina Rodríguez kwuru.
Formar Onye Mmekọ: Irina Shayk
Children: Cristiano Ronaldo Jr. (Nwa), Eva Maria Dos Santos (Nwa nwanyi), Alana Martina dos Santos Aveiro (Nwa nwanyi) na Mateo Ronaldo (Nwa nwanyi).
Nne na Nna Ochie Jose Vivieros (Nna Nwanyị Nne), Matilde dos Santos da Viveiros (Nne Nne).
Nna Nna Ochie Filomena Aveiro (nne nne ochie),
Hemụ ụmụ nwoke: José Dinis Pereira Aveiro (nwa Katia Aveiro), Rodrigo Pereira Aveiro (nwa Katia Aveiro) na Hugo Tomás (nwa Hugo dos Santos Aveiro).
Iemụ nwanne nwanyị: Eleonor Caires (nwa Elma dos Santos Aveiro) na Alicia Beatriz Aveiro (ada Hugo dos Santos Aveiro).
Education: Gonçalves Zarco Basic na Secondary School, Funchal, Portugal.
Elu na Inkwụ na Inches: 6 ft 2 na.
Ogo na igwe: 1.87 m.
Ọ dị egwu na ọ nọgidere bụrụ ndị na-egwu egwuregwu kachasị mma maka oge. M hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ ga - eduzi Real Madrid site n'aka 2016 / 2017 na onye mmeri nke ndị na - akwado 2017 na - akwado egwuregwu EUFA. Chineke ga-anọgide na-enye ya amara.